မဟာရာဇာ စာစဉ်များ | AnZarTone
by AnZarTone မဟာရာဇာ စာစဉ်များ
လောက၌ တူမျှသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟူသည်ကား ပေးတိုင်းလည်း ပြန်မရတတ်ပေ။ ထိုနည်းတူ ရှေးလူတို့အဆိုအတိုင်း စေတနာ ဟူသည်လည်း ဝေဒနာ ဖြစ်တတ်၏။
ပြဒါး သုတ်လိမ်းထားသော မှန်တစ်ချပ်ကဲ့သို့လည်း မိမိမှ ညာဘက် လက်ကို မြှောက်ပြပါလျက် မှန်အတွင်း ထင်းနေသော ပုံရိပ်က ဘယ်ဘက် လက်ကို ပြန်လည် မြှောက်ပြသကဲ့သို့ မိမိမှ တူညီသည် ထင်မှတ်သော အရာများသည်ကား စေ့စေ့ တွေးကြည့်သောအခါ သွေဖီ ဆန့်ကျင်ခြင်းတို့သည်သာ ဖြစ်နေတတ်ပေ၏။
သာမန် အသံတို့ ကင်းဆိတ်သော ညခင်းအခါတွင် လွန်စွာ တိုးညှင်းသော အသံတို့သည် ထင်ရှားလာတတ်သကဲ့သို့ အပေါ်ယံ အပြုံးတုတို့အား ဖယ်ရှား၍ ခေါင်းအေးအေးထား စဉ်းစား သုံးသပ်ကြည့်သော အခါတွင်ကား အမှန်တရား ဟူသည် ထင်စွာ ပြုလာတတ်လေသည်။
တိမ်ဖုံးသော လမင်းကဲ့သို့ မျက်ကွယ်ပြုခြင်း ခံရသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့သည် ညီတူမျှခြင်းအား မျှော်လင့်ပါလျက်ကယ်နှင့် မညီမျှခြင်းများဖြင့်သာ ကြုံတွေ့ရဖန် များလာသောအခါ ကဏန်းတစ်ကောင်၏ လမ်းလျှောက်ခြင်း ကဲ့သို့ လောကအား ဖီလာကန့်လန့်ပြု၍ သွားတတ်လေ၏။
လက်သည်းဆိတ်ရာများသော ဗူးသီးကဲ့သို့ ရင်သို့ထိခိုက်စေသော ဒဏ်ရာများသည် သေရာပါ အမာရွက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေလျက် စိတ်၏ ငြိမ်းချမ်းမှုအား မလှမပ ဖန်တီးတတ်လေ၏။
တစ်ခါတစ်ရံ လောက၌ မိမိမှ ပြုံးပျော်စေရန် ရည်ညွန်းပြောသော စကားတစ်ခွန်းသည်လည်း စေတနာ မမြင်တတ်သော လူနှင့် တွေ့ကြုံရသောအခါ မိုက်ရိုင်းသည်ဟူ၍လည်း ပြောခံရတတ်သေး၏။
နေရောင်ထိတော့ လန်း၊ နေရောင် မရတော့ ညှိုးနွမ်း၊ နေကို မျှော်လင့်တတ်သည့် နေကြာပန်း၏ အဖြစ်သည်ကား သစ္စာ မေတ္တာဟူသော မှတ်ချက်ထက် ရူးခြင်း၊ မိုက်ခြင်းဟူသော မှတ်ချက်ဖြင့်သာ တန်လေ၏။
မည်သို့ဆိုစေ၊ ဝေဒနာ ပစ္စယာ တဏှာ ဟူသည်ကြောင့် တွေ့ထိသမျှ ဖီးလ် ဖြစ်သွားသောအခါ နောက်ဘဝ မျိုးစေ့အား ပျိုးချရာ မည်သည်ဖြစ်၍ မြင်၊ ကြား၊ နံ၊ သိ စသည့် ဝေဒနာ အဖြာဖြာ ဖြစ်ပေါ်လာလေသောအခါ လိုချင် တပ်မက်ခြင်း တဏှာ မဖြစ်ပေါ်စေပါဘဲ မြင်စဉ်ခဏ၊ ကြားစဉ်ခဏ မမြဲသော သဘောတရားတို့ကို သိမြင်ပေးပါမှ ဝေဒနာ နဲ့ တဏှာ ကြား ဘုရားပွင့် ဆိုသကဲ့သို့ နောက်ဘဝ၊ နောက်ခန္ဓာ၊ ဆင်းရဲတာရှည်ရမည့် အဖြစ် ကုဋေကုဋာကို မုချမှန်စွာ ရှောင်လွှဲနိုင်ခြင်းသည်သာ ဖြစ်ပါပေတော့မည်တည်း ….။
This entry was posted in ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ. Bookmark the permalink.
← Love U …..	Gmail ကို Password သိလည်း ဖွင့်မရအောင် ထားတဲ့နည်း →